Gen. Xaamud oo qalab isgaarsiineed ku wareejiyey booliiska Kismaayo
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo uu wehliyey Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya Maxamed Sh. Xasan Xaamud ayaa Maanta kormeer ku tagay Saldhiga Booliska Kismaayo.
Madaxweynaha iyo Taliyaha ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee Saldhiga Magaalada Kismaayo oo hadda Talis guud u ah Ciiidamada Booliska Jubbaland.
Taliyaha Ciidamada Booliska Soomaaliya Maxamed Sh. Xasan Xaamud ayaa intii uu halkaas ku sugnaa waxa uu qalab isgaarsiineed oo casri ah gudoonsiiyey saraakiisha booliska Kismaayo.
Madaxweynaha Jubbaland iyo Taliyaha ayaa si toos ah ula hadlay Saldhigyada Ciidamada Booliska ee Muqdisho Baladweyne Jowhar Carmo iyo Baydhabo iyagoo tijaabinayey qalabkaas.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay muuqato rajo ah in ay soo noqonayso haybadii Ciidamada Booliska Soomaaliyeed oo waliba ku hawlgalaya adeegyo casri ah wuxuuna cusay in ay abuurayso jawi muujinaya in ay soo noqonayso Xasiloonidii Dalka.